Gudoomiyaha Minneapolis ee dalka Maraykanka oo taageertay Murashax Maxamuud Nuur – Sawiro | SAHAN ONLINE
Gudoomiyaha Minneapolis ee dalka Maraykanka oo taageertay Murashax Maxamuud Nuur – Sawiro
Duqa magaalada Minneapolis ee gobalka Minnesota Betsy Hodges, ayaa taageero buuxda siisay Maxamuud Nuur oo ah siyaasi Soomaaliyeed u sharaxan xubin golaha deegaanka ah ee magaaladaasi.
Duqa magaalada oo meel fagaare ah kula hadleysay taageerayaasheeda oo isugu jiray Soomaali iyo caddaanka u dhashay dalka Mareykanka, ayaa sheegtay in Maxamuud Nuur uu yahay hogaamiye karti badan oo in muddo ahna u soo shaqeeynayay bulshada gobalka, gaar ahaan Soomaalida.
Betsy Hodges, ayaa lafteedu haatan ku jirta tartanka doorashada ee duqa magaalada, xilkaasi oo ay heysay afartii sano ee la soo dhafay.
Musharax Maxamuud Nuur, ayaa soo dhaweeyay taageerada uu ka halay duqa magaalada, waxa uuna sheegay in la gaaray xilligii ay bulshada Soomaaliyeed dooran laheyd dad karti leh oo wax qaban kara, islamarkaana ay bulshadu dadka ay doorayaan ku fiiriyaan cabir caafimaad qaba si loo helo midnimo iyo waxqabad.
Qofka aad dooraneysaan waa inuu ahaado qof aad ku xulataan karti iyo waxqabad, anigu waxaan u taaganhay midnimada iyo isu keenidda dadkii la kala dilay 4 sano ee la soo dhaafay oo weliba dadkii aad codkiina siiseen oo aad moodeyseen inay umadda wax u qabanayaan ay jaaliyadda dhabarka ka jabiyeen…” ayuu yiri Maxamuud Nuur oo ay u sacab tumayeen taageerayaal Soomaali u badan oo ruxayay boorar uu magaciisu ku xardhan yahay.
Maxamuud Nuur ayaa kula dardaamay dadka Soomaaliyeed inay markale u codeeyan duqa magaalada Minneapolis Betsy Hodges oo uu sheegay in haddii ay markale doortaan ay wixii ay soo qabatay wax ka sii weyn u qaban doonto magaalada iyo dadka ku dhaqan, gaar ahaan Soomaalida. Maxamuud Nuur ayaa aad ugu dheeraaday sida ay Betsy Hodges gaashaanka ugu daruurtay weeraradii Islaam naceybka iyo Soomaali takoorka ahaa ee bulshada ugu yimid madaxweyne Trump iyo dadka muslimiinta iyo muhaajiriiinta neceb ee dalkan Mareykanka.
Waxaa dan noogu jirtaa inaan helno Mayor iyo gole deegaan oo wada shaqeeya ee uma baahnin qof Soomaali ah oo inta aan u codeyno meeshii uu wax natari lahaa dhibaato iyo naceyb hor leh noo soo jiida, oo nasii kala qeybiya. Haddii aad i doorataan, Betsy Hodges-na aad doorataan waxaan diin balan qaadayaa inaan dantiina iyo hormarkiina ka shaqeyno…” ayuu yri Maxamuud Nuur.
Musharax Maxamuud Nuur ayaa labadii sano ee la soo dhaafay waxa uu ku guuleystay inuu shaqo geeyo tiro ka badan laba kun oo qof oo Soomaali ah, isagoo shaqooyin hormar leh uga soo dhameeyay shirkado ay ka mid tahay shirkadda caanka ah ee Amazon.
Doorashada ayaa ku beegan 7da bisha November ee sanadkan, waxaana dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay aad looga dareemayay magaalada Minneapolis kororka taageerayaasha Maxamuud Nuur oo marba marka ka danbeysa xooggoodu soo badanayo.
Anwar Yare Bosaso